"Acrobat TOP": nkọwa na ntụziaka maka ojiji - Nkwadebe maka osisi - 2019
Ejikọtara ịrịa ọrịa "Acrobat TOP": ntụziaka maka iji
N'ụzọ dị mwute, ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi na-eche ụdị ọrịa niile dị iche iche na-emekarị ka ha belata, ma ọ bụ ọbụna na-eduga n'ọnwụ ọnwụ. Ndị na-emepụta fungicides n'afọ ọ bụla na-enye ọhụụ ọhụrụ ha, nke e mere iji merie ọrịa ahụ n'oge kachasị anya. Otu n'ime ọgwụ ndị a bụ akụkụ abụọ nke mpaghara funicide mpaghara "Acrobat TOP", nke BASF mepụtara.
Ngwá ọrụ ọrụ na usoro nke ihe
Ihe ndị bụ isi nke "Acrobat TOP"
Ntughari "Acrobat TOP" bụ ọgwụ ọhụrụ na ọgụ megide mkpụrụ vaịn mildew. Ihe ọzọ na-enye aka na rubella na ntụ ojii. A na-enweta ya n'ụdị mgbochi mmiri.
Ị ma? A kpọpụtara Mildew, ọrịa ọrịa, na Europe site na North America na 1878.
Ihe ndị na-arụsi ọrụ ike bụ dimethomorph (150 g / kg) na dithianon (350 g / kg). Ihe dị na dimethomorph nwere ikike dị mma, ọ na-ekesa ya na ngwongwo osisi, na-enye nchedo ọbụna ebe ọ na-erubeghị ọgwụgwọ ahụ. Dimotomorph na-egbochi ịmalite mkpụrụ ndụ fungal n'oge ọ bụla nke mmepe.
Ị ma? Fungicides bụ ọgwụ ọjọọ maka ịlụso ọrịa ọgụ, ụmụ ahụhụ na-alụso osisi pests, na ọgwụ ndị na-egbu ahịhịa megide ahịhịa.
Dithianon - ihe prophylactic edinam. Mpempe akwụkwọ dị n'elu nke mpempe akwụkwọ a na-egbochi mmiri ozuzo na-eguzogide mmiri na-egbochi nsị nke spores nke ero ahụ n'ime ọkpụrụkpụ.
Ngwá ọgwụ "Acrobat TOP" nwere ntụziaka ndị a maka iji:
usoro ntanetị si na 1.2 ruo 1.5 l / ha.
ngwakọta ngwakọta - aka 1000 l / ha.
ọnụ ọgụgụ nkedo abụghị ihe karịrị atọ kwa oge.
oge nchebe bụ 10-14 ụbọchị (dabere na ọrịa ahụ siri ike).
A na-atụ aro nhazi nke mkpụrụ vaịn na njedebe nke okooko osisi, dị ka ihe mgbochi ma ọ bụ ihe ịrịba ama mbụ nke ọrịa. Na oge a, mkpụrụ vaịn na-adọrọkarị ka agha. N'agbata mkpịsị azụ ikpeazụ nke fungicide na owuwe ihe ubi a na-atụ aro kwa ọnwa.
Mgbe ị na-amị mkpụrụ vaịn n'ụlọ, a ghaghị icheta ya na ọ na-esikarị ike na ọrịa na pests na-atụle ụdị anụ ọhịa. Iji zere iji belata ogo na oke nke ngwaahịa ahụ, a na-atụ aro ka ị na-emeso mkpụrụ vaịn ndị dị otú ahụ na-egbu egbu: "Mmanya", sulfate ígwè, Bordeaux ngwakọta, "Thanos", "Ridomil Gold", "Tiovit Jet", "Scor".
Ọ dị mkpa! Ihe kacha mma maka ọgwụgwọ bụ + 5-25 ° Cel, ifufe ọsọ ekwesịghị gafere 3-4 m / s.
A kwadebere ngwọta ozugbo tupu ojiji. Ajuju juru na mmiri maka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke olu ahụ, a kwadoro nkwadebe ahụ na-aga n'ihu na-akpali akpali, mgbe ahụ mmiri na-agbakwunye n'elu. Ghaa osisi ndị a na-agba agba.
Dị ka ọ dị na pesticides ndị ọzọ, ị kwesịrị ịgbaso ụfọdụ iwu nchekwa:
na-arụ ọrụ na uwe na aka ogologo, uwe na iko;
chebe imi na ọnụ na respirator ma ọ bụ gauze;
mgbe arụchara ọrụ, kpochapụ ihe niile na egbe égbè;
zere ikpochapu nso nri;
Debe ọgwụ ahụ ka ụmụaka ghara iru.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ihe ngwọta ahụ abanye n'ime anya ma ọ bụ akpụkpọ anụ mucous, gwọọ ha mmiri na-agba ọsọ ma gwa dọkịta.
"Ọgwụ Acrobat TOP" nwere ọtụtụ uru:
Ọ nwere mmetụta ọgwụgwọ - ọ na-egbu mycelium nke fungi maka 2-3 ụbọchị mgbe ọrịa. Ya mere, ọ na-emetụta ụdị ọrịa ahụ na-apụtaghị ìhè;
nwere ihe mgbochi - egbochi mmepe nke mildew, ma n'ime anụ ahụ dị n'ime na n'elu akwụkwọ;
nwere mmetụta na-eme ka mgbochi - gbochie mgbasa nke mildew na ubi-vine;
na-eguzogide ọgwụ iji saa mmiri;
adịghị agụnye dithiocarbomate.
Marigold na-enweghị atụ: atụmatụ, foto na nlekọta
Ihe bara uru ma na-emerụ kabeeji Peking
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ejikọtara ịrịa ọrịa "Acrobat TOP": ntụziaka maka iji